Budata CCleaner Browser maka Windows
Budata CCleaner Browser
Free Budata maka Windows (4.40 MB)
Budata CCleaner Browser,
Nchịkọta CCleaner bụ ihe nchọgharị weebụ nke nwere nchebe na ihe nzuzo iji chebe gị na ịntanetị. Ọ na-abịa na ngwaọrụ niile ịchọrọ iji jikwaa nzuzo gị nịntanetị, njirimara na data nkeonwe. Nwere ike ibudata ma nwalee Nchọgharị CCleaner, ihe nchọgharị ngwa ngwa, nkeonwe na nchedo maka Windows, site naka ndị mmepe nke CCleaner nefu.
Budata Ihe nchọgharị CCleaner
Ihe nchọgharị weebụ nke ndị mmepe nke CCleaner, otu nime ihe nhicha PC kacha mma kachasị mma nke ndị ọrụ họọrọ iji mee ka kọmputa ahụ dị ngwa ma mee ka ọ dị nchebe, na-abịa aha CCleaner Browser. Isi ihe nchọgharị CCleaner, nke na-abịa na nchekwa nchekwa na atụmatụ nzuzo nke na-echekwa gị na ịntanetị:
Ad igbochi - Adblock na-akwụsị mgbasa ozi site na itinye na weebụsaịtị ị gara, nke na-eme ka nchọgharị na ọsọ na nchekwa dị mma. Mgbachi ad gbanyere na ndabara.
Mgbochi Mkpịsị Aka - Ebe nrụọrụ weebụ na netwọk mgbasa ozi nwere ike iji nhazi ihe nchọgharị gị pụrụ iche iji soro gị. Mkpịsị aka gị na mkpịsị aka mejupụtara data gbasara ngwaọrụ gị nhazi, ihe nchọgharị, na ntanetị nịntanetị nke echekwara mgbe niile ka ị na-emekọrịta na weebụsaịtị. Mkpịsị aka Mgbochi na-enyere aka zoo akara mkpisiaka dijitalụ gị iji gbochie weebụsaịtị ịmara na nsochi gị na-enweghị nkwenye gị. Ihe mgbochi mkpịsị aka nwere ike zoo ozi dị mkpa maka weebụsaịtị ụfọdụ iji rụọ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ị nwee nsogbu na weebụsaịtị ị na-agakarị, ịnwere ike iwepu njirimara ahụ nwa oge.
Mgbochi-Phishing - Mgbochi-Phishing na-egbochi obi weebụsaịtị na phishing mgbalị mgbe ị na-agagharị na weebụ. Ọ na - egbochi gị ịbudata ọdịnaya nwere ike ịntanetị nke nwere ike ibute kọmputa gị. Anti-Phishing na-nyeere na ndabara.
Mgbochi mgbochi - Mgbochi mgbochi na-echebe nzuzo gị site na igbochi weebụsaịtị, ụlọ ọrụ nchịkọta, netwọk mgbasa ozi na ọrụ weebụ ndị ọzọ site na ịdebe ọrụ gị nịntanetị. Ọ na-ejikwa ihe nzacha wepu kpamkpam njehie weebụ, nsuso ederede, na ndị nchịkọta ozi ndị ọzọ na saịtị ndị ị gara. Ejiri ndabere na Mgbochi Ndepụta.
CCleaner - CCleaner na-ehicha faịlụ junk na data nchọgharị iji nyere aka kpuchido nzuzo gị, mee ka kọmputa gị dị ngwa ma mee ka ọ na-arụ ọrụ nke ọma ogologo oge. (Ọ dị na Securitylọ Nche na Nzuzo ma ọ bụrụ na arụnyere CCleaner.)
Mgbatị (Mgbatị) Nchedo - Nchedo Mgbatị na-egbochi ịgbakwunye ndọtị / plugins enweghị ntụkwasị obi na arụnyere na Ihe Nchọgharị CCleaner. Nke a na atụmatụ na-nyeere na ndabara.
Flash Blocker - Ihe ndị dabeere na Flash na-ekpughe kọmputa gị na njirisi nchebe, na-ewe ohere na kọmputa gị, ma na-eri ọtụtụ ndụ batrị kọmputa gị. Flash Blocker na-egbochi ọdịnaya sitere na Flash site na ịgba ọsọ na PC gị belụsọ ma ịhọrọ ịhapụ ya.
Ihe nzuzo HTTPS - HTTPS bụ ụdị echedoro maka njikọ HTTP ọkọlọtọ. HTTPS na-agbakwunye izo ya ezo nke na-egbochi ndị ọzọ ịge ntị na ntanetị ma nyere aka hụ na ejikọrọ gị na sava ahụ ezubere iche. Ihe nhichapụ HTTPS na CCleaner Browser na-enye ohere weebụsaịtị ọ bụla ị gara iji jiri njikọ HTTPS ma ọ bụrụ na ọ kwadoro ya. HTTPS izo ya ezo na-nyeere na ndabara.
Njikwa Paswọdu - Njirimara Njikwa Paswọdu na Nchọgharị CCleaner na-enye gị ohere ịchekwa okwuntughe gị notu ebe. Nke a pụtara na naanị ị ga - echeta otu paswọọdụ nnabata.
Nzuzo Nzuzo - Nzuzo Nzuzo na-ehichapụ akụkọ ihe nchọgharị gị, ihe oyiyi echekwara, kuki na ndị ọzọ ma na-enye ohere ohere na kọmputa gị iji nyere aka kpuchido nzuzo gị.
Ọnọdụ Incognito - althkpụrụ nzuzo bụ ihe nzuzo nke na-egbochi ịchekwa akụkọ ihe nchọgharị gị ma hichapụ kuki ọ bụla nsuso ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ ị nwetara noge oge Nzuzo Nzuzo gị.
Video Downloader - Video Downloader-enye gị ohere download video na ọdịyo ọdịnaya site ọkacha mmasị gị na saịtị. Iji jiri atụmatụ a, pịa akara ngosi vidiyo vidiyo na akuku aka nri nke ihuenyo ahụ, wee họrọ vidiyo na usoro ịchọrọ ibudata.
Nchedo kamera - Nche igwefoto weebụ na-enye gị ikike ịchịkwa ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịnweta kamera weebụ gị. Oge ọ bụla weebụsaịtị ị gara na-anwa ịnweta igwefoto weebụ gị, ọkwa na-egosi na ị ga-ekwe ka ma ọ bụ gaa nihu igbochi weebụsaịtị.
CCleaner Browser Ụdịdị
Nha faịlụ: 4.40 MB